Real Madrid Oo La Soo Wareegtay Messi-ga Japan Iyo Maradona Oo Ka Tagaya Kooxdii Mexico | Saxil News Network
Real Madrid Oo La Soo Wareegtay Messi-ga Japan Iyo Maradona Oo Ka Tagaya Kooxdii Mexico
Wiilkan 18 jirka ah ayaa ka ciyaara weerarka, waxaana sida wargeyska Marca ee kasoo baxa Spain uu sheegay, Real Madrid ayaa Kubo ku iibsatay laba milyan oo euro, isaga oo saxiixi doona shan sano oo qandaraas ah.
Kubo, oo bishi hore kulankiisi ugu horreeyay u saftay xulka Japan ciyaar ay la dheeleen El Salvador, ayaa xilli ciyaareedki dhamaaday wacdaro ka dhigay horyaalka Japan ee J League. Wuxuu ka tirsanaa kooxda hadda ay Real kasoo iibsatay ee FC Tokyo.
Kubo ayaa ku biiraya dhowr laacib oo todobaadyadi dhawaa ay Real soo iibsatay kuwaasoo ay ka mid yihiin Eden Hazard, Luka Jovic oo weerarka ka dheela iyo laacibka difaaca ka ciyaara ee Ferland Mendy.
Qareenkiisa oo lagu magacaabo Matias Morla ayaa sheegay in dhaqtarka Maradona uu kula taliyay inuu ka joogsado shaqada tababaranimo ee uu ka hayo Mexico, sababo la xiriira qalliino uu dhawaan ka mari doono garabka iyo jilibka.
Maradona ayaa leylinayay kooxda Dorados oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka Mexico muddo sagaal bilood ah. Wuxuu xiligaasi wacad ku maray inuu gaarsiin doono ciyaaraha heerka koowaad balse wali way ku jiraan heerka labaad.
Maradona, oo xulka Argentina kula guuleystay Koobka Aduunka sannadki 1986 ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah laacibiinti kubadda cagta ee aduunyada soo maray.